Smartphones – Compare.com.mm
Mobile Charges Calculator
Google ၏ Pixel XL ကို iPhone7Plus , Galaxy Note7တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
September 5, 2017 September 5, 2017 George Htet Myat
မနှစ်က San Francisco မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Google October Event 2016 မှာ Pixel နဲ့ Pixel XL ဖုန်းတွေကို ပွဲထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Pixel က ပုံမှန် 5-inch full HD screen နဲ့ထွက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပေမယ့် Pixel XL ကတော့ phablet-sized 5.5-inch Quad HD screen နဲ့ထွက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy S8 နဲ့ Xiaomi Mi6ကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
August 29, 2017 September 6, 2017 George Htet Myat
Galaxy S8 နဲ့ Mi6ဟာ Samsung နဲ့ Xiaomi တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ S8(64GB) ရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ ၁၀ သိန်း ၅ သောင်း ၀န်းကျင်ရှိပြီး Mi6(64GB )ကတော့ ၅ သိန်း ၅ သောင်း ၀န်းကျင်သာရှိတဲ့အတွက် ထက်ဝက်ခန့် ဈေးကွာခြားပါတယ်။ Specifications များကတော့ သိပ်ကွာခြားမှု မရှိတဲ့အတွက် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ S8 ဟာ ရွေးချယ်သင့်ရဲ့လား ? S8 ရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ စွမ်းရည်များက ဒီဈေးကို ပေးဖို့ တန်ရဲ့လား? အဲဒီ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကို ဒီ Comparison မှာ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
MWC က ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ specs နှိုင်းယှဉ်ချက်များ
February 28, 2017 September 6, 2017 George Htet Myat
စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၆) ရက်နေ့ကနေ မတ်လ (၂) ရက်နေ့ထိ Mobile World Congress (MWC) 2017 ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာပြပွဲကြီးကို တခမ်းတနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဈေးကွက်အတွင်းက မြန်မာငွေ (၂) သိန်းကျော်တန် စမတ်ဖုန်း specs များ နှိုင်းယှဉ်ချက်
January 24, 2017 October 12, 2017 George Htet Myat
HTC U Ultra ကို iPhone7Plus နှင့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်တဲ့အခါ
January 20, 2017 September 6, 2017 George Htet Myat
HTC ရဲ့2017 flagship စမတ်ဖုန်း အဖြစ်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဒီဖုန်းဟာ 2016 flagship စမတ်ဖုန်းတွေထက် ဘာတွေထူးခြားလာသလဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ newatlas website က 2016 ခုနှစ်အတွင်းက အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် iPhone7Plus နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားပါတယ်။ ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရရင် …
အကောင်းစား စမတ်ဖုန်း ကင်မရာ ၃ ခုကို နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ခြင်း
December 10, 2016 September 5, 2017 George Htet Myat
စမတ်ဖုန်းကင်မရာများဟာ အဆင့်မြင့်လာကြပြီး ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုတွေကိုတောင် ရိုက်ကူးလာကြပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီများကလည်း ကင်မရာ စွမ်းရည်ကို ပြိုင်ဘက်များထက် သာအောင် အပြိုင်အဆိုင် တီထွင်လာကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် အနောက်ကင်မရာ ၂ လုံး ပူးတွဲ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းများ ခေတ်စားနေပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းများဖြစ်တဲ့ Apple iPhone7Plus, Google Pixel နဲ့ LG V20 တို့ကို ကာလရှည်ကြာ စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး အဒီအထဲက အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်း ကင်မရာကို ရွေးထုတ်ပြချင်ပါတယ်။
Google Pixel XL နဲ့ Samaung Galaxy S7 Edge တို့ရဲ့ ကင်မရာ နှိုင်းယှဉ်ချက်
October 24, 2016 September 7, 2017 George Htet Myat
လက်ရှိ နည်းပညာလောကထဲက စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေဟာ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကင်မရာပိုင်းကို အသားပေး ရွေးချယ်လာကြတဲ့အလျောက် Google ရဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Pixel ဖုန်းတွေမှာ ကင်မရာပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထူးထူးခြားခြား မြှင့်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Google ဖုန်းတွေ မထွက်ခင်က Samsung Galaxy S7 edge ရဲ့ ကင်မရာအရည်အသွေးက Android ဖုန်းလောကကို ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ Google ရဲ့ Pixel XL စမတ်ဖုန်းကလည်း ကင်မရာ အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်တဲ့ အတွက် Samsung Galaxy S7 edge နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်စရာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒီတော့ Pixel XL နဲ့ Galaxy S7 edge တို့ရဲ့ ကင်မရာပိုင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်။
တစ်သိန်းခွဲ ပတ်ချာလည် ဈေးအသက်သာဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းများ နှိုင်းယှဉ်ချက်
September 4, 2016 September 5, 2017 George Htet Myat
အခု နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ဟာ နိုင်ငံတကာ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တချို့ဖုန်းတွေဟာ ပြည်တွင်းဈေးကွက် ကို ရောက်ရှိလို့ နေပြီး တချို့ကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲကြန့်ကြာမှု လမ်းစဉ်မှာပဲ ခရီးစဉ်သွားခဲ့ရပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို ရောက်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် တချို့ဖုန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ သုံးစွဲချင်တယ် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတကာကို လှမ်းပြီး မှာယူရရှိနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းအရောင်းအ၀ယ်တွေကနေ တဆင့် မှာယူရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကို လည်း နိုင်ငံတကာ ရဲ့ ယူရို ၊ ပေါင် စတဲ့ ဈေးနှုန်းအသီးသီး ကို မြန်မာ ငွေကြေး နဲ့ ယှဉ်တွဲတွက်ချက်ပြထားပါတယ်။ တွက်ချက်တဲ့ ရက်စွဲကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဈေးနှုန်း အနိမ့်၊ အမြင့် ၊ အတက် ၊အကျ တော့ အထိုက်အလျောက် ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုခ အသက်သာဆုံး အော်ပရေတာကို တွက်ချက်အဖြေရှာကြည့်ရအောင် …
Drone ဈေးကွက်ထဲက DJI Phantom4နဲ့ GoPro Karma ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ
Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8+ ကို LG G6 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
ဖုန်းခေါ်ဆိုခ အသက်သာဆုံး အော်ပရေတာကို တွက်ချက်အဖြေရှာကြည့်ရအောင် ...
စားသုံးသူ ပြည်သူများအတွက် မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီတင်ဆက်အဓိက ရည်ရွယ်ပါသည်။ Content King အဖွဲ့မှ ကြိုးစားတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။